Travel Tips Archives - LODGGY
Why you should go onaStaycation now?
December 17, 2020 Waiyan Min Thant	City Guides, Recommendation, Travel Tips
In these trying times,arelaxed state of mind isadifficult one to achieve. You can say you are more than relaxed but (trust me) you have been on edge with everything going on (pandemic, lockdowns and such). Maybe you find some memories on your social media, your camera roll or even dream of …
Read the full post →“Why you should go onaStaycation now?”
LeaveaComment on Why you should go onaStaycation now?
ကလောမြို့က လည်ပတ်စရာ နေရာများ
June 4, 2020 kyaw kyaw	Kalaw, Myanmar
ခရီးတွေပြန်သွားလို့ရရင် အေးချမ်းလှတဲ့ ကလောမြို့လေးကို သွားမယ့်သူတွေ ရှိကြလား? ကလောမြို့ကို ပထမဆုံး သွားရောက်လည်ပတ်မယ့်သူတွေအတွက် ကလောမြို့ရောက်ရင် လည်ပတ်ရမယ့်နေရာလေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်.ဘယ်နေရာလေးတွေဘယ်လိုလှလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ပါအုံး.. အိုးစည်တောင် – ကလောမြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် ကားနဲ့ဆို ၁၅ မိနစ်လောက်သွားရပြီး အိုးစည်တောင်ပေါ်ကနေဆိုရင် အောင်ပန်း၊ မြင်းကရွာ၊ ကလောမြို့ နဲ့ ရှမ်းတောင်တန်းတွေ၊ လွင်ပြင် စိုက်ခင်းတွေရဲ့ သဘာဝရှုခင်းအလှအပတွေကို အပေါ်စီးက တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဆောင်းရာသီ တစ်ချို့ မနက်ခင်းတွေဆို တိမ်ပင်လယ်လိုမျိုး မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရှမ်းတောင်တန်းတွေပေါ် နေရောင်ကွက်ကြားလေးတွေနဲ့ အိုးစည်တောင်ပေါ်က ကြည့်ရင် အရမ်းလှတယ်။ အိုးစည်တောင်ထိပ်မှာ စေတီတစ်ဆူလည်း တည်ထားပါတယ်။ ကလော နှီးဘုရားကြီး – ကလောမြို့ရဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ကလောနှီးဘုရားကတော့ ကလောမြို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သွားရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့ နေရာလေးပါ။ သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ စစ်တမ်းအရ …
Read the full post →“ကလောမြို့က လည်ပတ်စရာ နေရာများ”
LeaveaComment on ကလောမြို့က လည်ပတ်စရာ နေရာများ
April 8, 2019 cody kg	Hotel Reviews, Myanmar, pool, Recommendation, Travel Tips
ဒီအပတ် Review ကတော့ ? ပုဂံနဲ့ ကျိုက်ထို တို့မှာ နာမည်ရပြီးသား Bawgatheiddhi Hotel Group ရဲ့ ငပလီကမ်းခြေမှာ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ BT Bay Ngapali အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ??? ? တည်နေရာ BT Bay Hotel ဟာဆိုရင် နာမည်ကျော်ငပလီကမ်းခြေ ⛱တစ်နေရာဖြစ်တဲ့ လင်းသာရွာတွင်တည်ရှိပြီး ဂျိတ်တောလမ်းမကြီး နံဘေး၊ ကမ်းခြေနှင့်အနီးဆုံးနေရာမှာရှိပါတယ်?။ သံတွဲလေဆိပ်ကဆိုလျှင် ၁၀ မိနစ် – (၅)မိုင်ခန့်ကွာဝေးတယ်။ လေဆိပ်မှလာလျှင် ငပလီဂေါက်ကွင်းကို⛳ အရင်တွေ့ရမယ်။ ဟိုတယ်က ဂျိတ်တောလမ်းမကြီးပေါ်?တွင်မှာဆိုပေမဲ့ ကမ်းခြေနှင့်အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ရှိသည့် အတွက် ဟိုတယ်လော်ဘီသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကမ်းခြေ၏အလှအပကို ချက်ချင်းခံစားနိုင်မှာပါ။ ? ? ဟိုတယ်အနေအထား ဟိုတယ်အဆောက်အဦက (၃)ထပ် Building Type …
Read the full post →“BT BAY NGAPALI HOTEL REVIEW”
beach, hotel review, may myo, myanmar, Ngapali, Rakhine, seafood, swimming pool, Thandwe, Travel, wednesday galleryLeaveaComment on BT BAY NGAPALI HOTEL REVIEW
September 15, 2017 Aung Toe	English, Recommendation, Travel Tips
I hope you are either preparing or have already planned to go travel because it is already ravel season. We can make some mistakes when we travel toanew area. So here are7things you should not do when you travel. DON’T take photos of people without permission Most travelers have faced such …
Read the full post →“7 Things not to do when you travel”
myanmar, recommendation, TravelLeaveaComment on7Things not to do when you travel
September 8, 2017 Aung Toe	Bagan, English, Tips, Travel Tips
E-Biking in Bagan is the ultimate way to explore Bagan. You not only have the freedom and the mobility to explore but also it is alsoagood way to get lost among the hundreds of temples on the road less traveled. Read these tips for the best tip of your life zipping by the …
Read the full post →“7 Tips for E-Biking in Bagan”
bagan,ebiking, ebike, myanmar, tipsLeaveaComment on7Tips for E-Biking in Bagan
September 4, 2017 Aung Toe	Myanmar, popa, Recommendation, Tips, Travel Tips
ပွင့်လင်းရာသီလဲ ရောက်ပြီ၊ အောက်တိုဘာမှာကလည်း ပိတ်ရက် ၅ရက်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ ခရီးသွားဖို့ ကြိုစီစဉ်တဲ့သူတွေလဲ ရှိရောပေါ့။ ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားမယ့် သူတွေရော ရှိမလား မသိဘူး။ ဒီလို မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး အချိန်တွေမှာ ပုဂံကို တကယ်သွားလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ယုံလိုက်ပါ။ ပုဂံကိုသွားတဲ့အခါ လူလဲသက်သာ အဆင်လဲပြေအောင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ ဆိုတာကို lodggy.com ကနေ Tour Guide ဆောင်းပါးလေး တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
bagan, burma, myanmar, recommendation, tour guideLeaveaComment on ပုဂံ-ပုပ္ပါး ၃ညအိပ် – ၄ရက်ခရီး
July 11, 2017 Aung Toe	Bagan, English, pool, Recommendation, Travel Tips
As ancient Bagan isacultural heritage of Myanmar, there are many tourists, guests and visitors. There are various hotels in Bagan and according to the price range. Here lodggy.com compiled the list of Bagan hotels with swimming pool for those who want to swim and relax. This will help for the guests who want …
Read the full post →“Best Hotel Pools in Bagan, Ancient Burma”
bagan, burma, myanmar, swimming poolLeaveaComment on Best Hotel Pools in Bagan, Ancient Burma
June 5, 2017 Aung Toe	Bagan, Bagan, English, Hotel Reviews, pool, Recommendation
Another lodging contender in Myanmar’s most popular tourist destination, Amata Bagan Boutique House boastsacomfortable pool area, classy rooms, well arranged trees & plants and one of the few fully equipped spas in Bagan. The Place Set inagarden compound, Amata Bagan Boutique House has the ambience ofaprivate home and isaperfect …
Read the full post →“Amata Bagan Boutique House Review”
bagan, boutique, hotel, hotel reviews, myanmarLeaveaComment on Amata Bagan Boutique House Review